बालविवाह ठिक कि बेठिक भन्दै दार्चुलामा भोटिङ्ग ! | katipath news
बालविवाह ठिक कि बेठिक भन्दै दार्चुलामा भोटिङ्ग !
दार्चुलामा बालविवाह न्यूनीकरण गर्नु ठिक कि बेठिक भन्दै मतदान भएको छ। उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि त्यसको न्युनीकरणका लागि मतदान भएको हो। मतदानमा विद्यार्थी, अभिभावक र जनप्रतिनिधिहरू मतदानमा सहभागी भएका छन्।
मालिकार्जुन गाउँपालिकालाई आगामी २०८० सालसम्ममा बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्यअनुरुप अहिले बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्। मालिकार्जुन गाउँपालिका–२, ३ र ७ मा मतदान कार्यक्रम गरिएको हो। सानै उमेरमा विवाह गर्नु राम्रो कि नराम्रो विषयमा मतदान गरिएको सामुदायिक ग्रामीण विकास समाज नेपालका सामाजिक सहजकर्ता वसन्ती धामीले बताइन्।
गुड नेवर्स इन्टरनेशल नेपालको आर्थिक सहयोग, मालिकार्जुन गाउँपालिकाको समन्वय र सामुदायिक ग्रामीण विकास समाज नेपालको आयोजनामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मतदान भएको हो। मालिकार्जुन मावि मडमा भएको मतदान कार्यक्रममा २५५ जना सहभागी भएका छन्। जसअनुसार बालविवाह गर्नु ठिक हो भन्ने पक्षमा २९ र विपक्षमा २२५ मत खसेको छ। एक मत बदर भएको सहजकर्ता धामीले बताइन्।
बुधबार पनि मात्र मालिकार्जुन गाउँपालिका–२ र वडा नं ७ मा बालविवाह गर्नु ठिक कि बेठिक भनेर मतदान भएको थियो । मालिकार्जुन गाउँपालिकाले विसं २०७६ मा बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय रणनीति तयार गरे लागू गरेको छ । सोहीअनुसार गाउँपालिकामा अहिले गुड नेवर्सको सहयोगमा बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेका छन्।
एक अध्ययनअनुसार मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १४ देखि १५ वर्षको उमेर समूहमा बालविवाह गर्ने सात दशमलव १४ प्रतिशत छन्। त्यसैगरी १६ देखि १७ वर्ष उमेर समूहमा विवाह गर्ने २७ दशमलव ७८ प्रतिशत, १८ देखि १९ वर्ष उमेरमा विवाह गर्ने ६४ दशमलव २९ प्रतिशत छ।
बालविवाहमा परेकामध्ये ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत मागी विवाह, १५ दशमलव नौ प्रतिशत भागी विवाह र २५ दशमलव चार प्रतिशत प्रेम विवाह भएको तथ्याङ्क छ। बालविवाहका कारण विद्यार्थीको बीचैमा पढाइ छुट्ने गरेको छ।